June 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Jun 30, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 10-11-1441…
Qarax ka dhacay Isogyska Cali Kamiin ee Muqdisho.
Axmad	 Jun 30, 2020 0
Wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in qarax xoogan uu ka dhacay isogyska Cali kamiin ee degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo katirsan magaalada…
Qof Shacab ah Oo Dhuusamareeb Lagu dilay.
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in askari katirsan ciidamada maamulka Galmudug uu qof shacab ah ku dilay gudaha magaaladaas. Askariga dilka geystay iyo qofka shacabka ah ee la…
Axmad	 Jun 30, 2020 2
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado, Taariikhda hijriguna waxay ku…
Banaanbaxyo ka dhashey dil ay geysteen ciidamada oo soconaya Itoobiya.
Qeybo kamid ah dalka Itoobiya waxaa si weyn ku socda bannanbaxyo gil-gilay dalkasi kadib markii xalay la dilay nin Oromo ah islamrkaana ahaa fannaan caan ka ah dalka gaar ahaan qowmiyada Oromda dhexdeeda. Goobaha caanka ah iyo…
Diyaarad Dagaal oo si farsameysan Loogu soo riday Afqaanistaan.
Ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa si farsameysan waxay ugu guuleysteen iney dhulka soo dhigaan diyaarad milliteri oo ay leeyihiin ciidamada Maraykanka ee duulaanka ku jooga dalkaas. Diyaaradda ay ciidamada Imaaradu soo…
Mareykanka oo dambiyo dagaal ka geysnaya Soomaaliya!
Shabakad lagu magacaabo "The War Horse" oo ka faaloota arrimaha military-ga ayaa baahisay warbixin dheer oo ay kaga hadleyso duullaanka Mareykanka ee Soomaaliya iyo sida shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah ay u gurteen miraha qaraar ee…
cusmaan	 Jun 29, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 09-11-1441 …
Waa kuma Sheekh Abuu Muscab Cabdul Waduud. (Dhagayso Waraysi)
Axmad	 Jun 29, 2020 0
Sheekh Abuu Muscab Cabdul Waduud, waa amiirkii hore ee Al-Qaacidada Maqribul Islaam, kaas oo dhawaan Faransiisku ku dilay wuqooyiga dalka Maali. Sheekhu wuxuu tan iyo sanadkii 1992-kii kamid ahaa mujaahidiinta Maqribul Islaam, wuxuuna…